‘जीवनभर से वा गरिम्, हाम्ले के पाइम् ?’ | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / फिचर समाचार / ‘जीवनभर से वा गरिम्, हाम्ले के पाइम् ?’
‘जीवनभर से वा गरिम्, हाम्ले के पाइम् ?’
Posted by: युगबोध in फिचर समाचार, स्लाइड August 10, 2018	0 110 Views
घो राही  । ‘कुमका छाला जान्थ्यो भट्टामा पानी बो क्दा । स् कूलमा न धारा न कुवा  । दिनकै ४०/५० खे प भट्टामा पानी ओ सार्नुपर्ने , नगरी नहुने । उपाय के ही थिएन । त्यो गर्मी, खाली खुट्टा । त्यो पानी बो काई कम्ति गाह्रो थिएन । सुख्खामा दिनको पाच रुप्पे मा काम शुरु गरें  । अहिले ३४ वर्ष पुगे र ३५ मा लागियो । अझै उस्तै छ’– मावि लालमटियाका विद्यालय सहयो गी वीरप्रसाद चौ धरीले भन्नुभयो  । उमे र ५० वर्ष पुगे का चौ धरी उमे रको आधा जीवन स् कूलको रे खदे ख र स् याहार सुसारमै बित्यो  । तर राज्यले घर जाने उमे र हु“दासम्म पनि के ही दिन नसके को उहा“ले का गुनासो छ । उहा“ले भन्नुभयो – ‘खुन पसिना राज्यकै से वामा सकियो  । यो बुढो उमे रमा के गरी घरमा गइ बा“च्ने ? उपाय के ही छै न ।’
लामो समयदे खि सामुदायिक विद्यालयहरुका कार्यालय सहयो गी तथा अन्य कर्मचारीका रुपमा कार्यरत व्यक्तिहरुलाई राज्यले सही व्यवस् थापन र दरबन्दी दिन नसक्दा जीवन नै अनुदानको पियन पाले भएर बिताउनुपरे को उहा“को गुनासो छ । ‘२०४० सालमा पा“च रुप्पे मा काम शुरु गरे को हु“ । अहिले ७५ सालभयो खै मै ले के पाए“ ?’– उहा“ले प्रश्न गदैर् भन्नुभयो – ‘राज्यले हाकिमलाई पे न्सन, पिउन पाले लाई टे न्सन दियो  । के यही हो पिउन पाले हरुप्रतिको राज्यको न्याय ?’
राज्यले तल्लो दर्जामा कार्यरत कर्मचारीको काममा लगाउने । तर से वा, सुविधा र पे शागत सुरक्षाको ग्यारे न्टी गर्न नसक्दा सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारी पीडित बने को उहा“को भनाइ छ । ‘राज्यले त्यही स् कूलका हाकिमलाई भत्ता पे न्सन सबै दिन्छ । हामीलाई टे न्सन मात्रै दियो  । आउ काम गर । मात्रै भयो हाम्रो जीवन’– उहा“ले दुखे सो पो ख्नुभयो  ।
उहाले जीवन नै राज्यको से वा र संरक्षणमा खर्चिएका व्यक्तिहरुको श्रम र से वाको उच्च सम्मान गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो  । जसले सामुदायिक विद्यालयहरुमा कार्यरत अनुदान तथा निजी स्रो तका कर्मचारीहरु न्याय दिन सक्ने उहा“को भनाइ छ । ‘स् कूलको कुचो दे खि कागजात, पै साको खातापातासम्म हामी कर्मचारीकै जिम्मे वारीमा हुन्छ । तर त्यही जो खिमको जिम्मे वारी बो क्ने कर्मचारी राज्यको विभे दको शिकार हुन्छांै  । जीवनभरि से वा भयो । तर राज्यले हामी से वकहरुलाई कहिल्यै हे र्न सके न । हामी राज्यद्वारा नै पीडित छौ ं’– विद्यालयका कर्मचारी माधव पराजुलीले भन्नुभयो  ।
राज्यले विद्यालय कर्मचारीहरुलाई अनुदानबाहे क अन्य कुनै से वा सुविधा दिन नसके को बताउदै उहाले भन्नुभयो – ‘निवृत्त से वा, पो शाक भत्ता, महंगी भत्ता छ“दै छ । दरबन्दीको पनि ग्यारे न्टी गरिनुपर्छ ।’ से वा, सुविधा र रो जगारको सुरक्षा हुन नसक्दा राज्यले कर्मचारीमाथि श्रम शो षण गरिरहे को उहा“को आरो प छ । श्रम अनुरुपको से वा सुविधा र सुरक्षा नपाउदा कर्मचारीहरुले श्रम शो षणकै अनुभूति गरिरहे को उहा“को भनाइ छ । उहा“ले भन्नुभयो – ‘राज्यले दिएको अनुदानमै कति दिन बा“च्ने ? त्यो पनि श्रम अनुसार थो रै छ ।’
आन्दो लनको तयारी
सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको माग पूरा नभए आन्दो लन गर्ने तय गरे का छन् । ने पाल विद्यालय कर्मचारी परिषद दाङले बिहीवार घो राहीमा ‘संघीय सरकारको दायित्व सामुदायिक विद्यालय कर्मचारीहरुको पे शागत स् थायित्व’ विषयमा आयो जित कार्यक्रममा परिषदले राज्यले माग पूरा नगरे चरणबद्ध आन्दो लनमा जाने चे तावनी दिएको छ । परिषदका अध्यक्ष गो विन्द घर्तीले दाङमा करिव साढे ११ सय कर्मचारी रहे काले पहिचानसहितको से वा सुविधा दिलाउनुपर्ने उहाले बताउनुभयो  ।
उहा“ले दरबन्दीको व्यवस् थापन गरी राज्यले कर्मचारीहरुको पे शागत स् थायित्व र सुरक्षाको ग्यारे न्टी नगरे सम्म परिषदले आन्दो लन फिर्ता नलिने बताउनुभयो  । तह–तहमा भे ला छलफलस“गै विद्यालयमा तालाबन्दीदे खि रिले अनसनसम्मका आन्दो लनको कार्यक्रम तय गरिएको उहा“ले े जानकारी दिनुभयो  ।
जायज माग पूरा गर
शिक्षक महासंघ दाङका अध्यक्ष अमरबहादुर खड्काले विद्यालय कर्मचारीहरुले उठाएका जायज मागहरुलाई राज्यले सम्बो धन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । परिषदका अध्यक्ष गो विन्द घर्तीको अध्यक्षतामा भएको अन्तत्र्रिmयामा प्रमुख अतिथि खड्काले यस् तो बताउनुभएको हो  । कार्यक्रममा शिक्षक संघ दाङका अध्यक्ष युवराज बस् ने त, राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका दामो दर बस् ने त, एकीकृत अखिल ने पाल शिक्षक संगठनका विष्णु भण्डारी, परिषदका के न्द्रीय सदस् य डम्बर ओ ली, घनवहादुर रावत, नगर शिक्षा प्रमुख नारायण पो ख्रे ल, राजमो का गणे े श आचार्य, विद्यार्थी ने ता सन्तो ष पो ख्रे ललगायतले बो ल्नुभएको थियो  ।
परिषदका जिल्ला सहसचिव पूर्णबहादुर विकको स् वागत मन्तव्यबाट शुरु भएको कार्यक्रममा भीमराज चौ धरीले आगामी कार्यक्रम र उद्दे श्यमाथि प्रकाश पार्नुभएको थियो  ।
कार्यक्रमको सहजीकरण सचिव के शवबहादुर के सीले गर्नुभएको थियो  ।
Previous: सल्यान मानव बेचबिखनको चपेटामा
Next: प्रदेश राजधानी तोक्न विशेष समिति
बिरामीलाई घर पु¥याउन निःशुल्क बस
दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ‘ठाउँका ठाउँ सुधार’ अभियान
काफल बेचेर पढाइ खर्च जुटाउँदै बालबालिका